के तपाई विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? घरमा आफ्नै मोबाइलबाट कल गर्नुस ! - नेपालबहस
गृहपृष्ठ बिज्ञान/प्रविधि टेलिकम के तपाई विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? घरमा आफ्नै मोबाइलबाट कल गर्नुस !
के तपाई विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? घरमा आफ्नै मोबाइलबाट कल गर्नुस !
अप्रील 29, 2019
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा आजदेखि प्रिपेड अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
प्रारम्भमा यो सेवा भारत र चीनमा लागू हुने प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिइन् । अब नेपाल टेलिकमका जिएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ता चीन वा भारत गएको समयमा आफ्नै मोबाइलबाट नेपालमा कल गर्न सक्ने छन् ।
नेपालबाट आएको कल उठाउन र एसएमएस पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्ने छन । त्यसैगरी सोही मोबाइलबाट चीन वा भारतका स्थानीय मोबाइल अपरेटरका नम्बरमा समेत कल गर्न सक्ने प्रवक्ता वैद्यले जानकारी दिइन् ।
“चीनमा हुँदा त्यहाँका स्थानीय टेलिकम अपरेटरको टेलिफोन वा मोबाइल नम्बरमा कल गर्दा प्रतिमिनेट रु ५० लाग्नेछ भने चीनबाट नेपालमा कल गर्दा प्रतिमिनेट रु ९० लाग्ने छ”, प्रवक्ता वैद्यले बताबउका छन् ।
कम्पनीको वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत माघ २२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘प्रिपेड अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ’ सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
भारत र चीन
अघिल्लो लेखखुल्यो गुराँस लघुवित्तको साधारण शेयर, १० कित्तामै आवेदन गर्न मिल्ने
अर्को लेखएनसेलमा आजबाट ‘कल आयो पैसा पायो’
के तपाईको मोबाइलमा ब्यालेन्स कम छ ?
टेलिकमको भष्ट्राचारमा श्रीमान श्रीमतिको मिलिभगत, एमडी अधिकारीले दिए चिनियाँ एण्टेनाको स्वीकृति
चट्याङले टेलिकम सेवा अवरुद्ध, मर्मत गर्न प्राविधिक टोली जाँदै
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्ग व्यक्तिलाई फ्रिमा मोबाइल